Ny beta an'ny iOS 12.1 dia manamafy fa ny iPad Pro dia hanana Face ID ary hiasa amin'ny sary sy sary | Vaovao IPhone
Ny iOS 12.1 beta dia manamafy fa ny iPad Pro dia hanana Face ID ary hiasa amin'ny sary sy sary
Tamin'ny taon-dasa dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny fomba fiarovana vaovao ampiasain'ny mpampiasa i Apple mba hiarovana azy ireo hatrany. Miresaka momba ny Face ID, teknolojia iray aho azo itokisana sy azo antoka kokoa noho ny Touch ID nentim-paharazana, izay niaraka taminay hatramin'ny 2013, rehefa tonga teny an-tsena ireo iPhone 5.
Rehefa nahatratra ny mpampiasa voalohany ny singa voalohany an'ny iPhone X, dia hitany ny fahitan'ity haitao ity avela hamaha ny farany amin'ny alàlan'ny fametrahana azy fotsiny, tsy mitsivalana, zavatra izay misy dikany tonga lafatra amin'ny voalohany, fa amin'ny tranga sasany dia fanelingelenana kokoa noho ny tombony. Ity haitao famantaran-tarehy ity dia ho tonga miaraka amin'ny iPad Pro manaraka, ary hiasa izy sy ny mitsivalana ary ny mitsivalana.
Efa am-bolana maro no niresahantsika momba ny fahafahan'ny Apple manavao ny elanelan'ny iPad Pro ao anatin'izany ny Face ID, fanamafisana iray izay tonga andro maromaro talohan'ny fampisehoana ireo maodely iPad vaovao, amin'ny alàlan'ny kaody beta 12.1 beta.
Araka ny hitantsika ao amin'ny 9to5Mac, ny beta an'ny iOS 12.1 dia misy tsipika vitsivitsy izay jereo ny iPad rehefa manamboatra Face ID. Araka ireo tsipika ireo dia hampahafantatra antsika ilay fitaovana fa aorian'ny fanatanterahana ny fanekena ny endritsika, dia hiasa ity rafitra fiarovana ity rehefa eo amin'ny toerana mijidina na marindrano ny iPad Pro.
Tamin'ny volana Jona lasa teo, tao amin'ny kaody iOS 12, nahitana torolàlana ihany koa momba ny mety hahatratra ny iPad ny haitao Face ID, satria manana safidy manokana ho an'ny iPad izy io. avelao ny famoronana Animojis sy Memoji, fiasa izay tsy misy afa-tsy noho ny fakantsary TrueDepth izay misy Face ID.
Amin'ny 30 Oktobra ho avy izao, ny daty anaovana ny hetsika, hamela fisalasalana isika. Avy amin'ny iPhone Actualidad hanatanteraka fanaraha-maso manokana ny hetsika izahay, mamoaka lahatsoratra feno miaraka amin'ireo zava-baovao atolotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny iOS 12.1 beta dia manamafy fa ny iPad Pro dia hanana Face ID ary hiasa amin'ny sary sy sary
Ny fifehezan'olombelona no tsiambaratelo kalitaon'ny Apple News
Izany no toa ilay fanavaozana mahavariana ny Shibuya Apple Store any Japon